नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यस पटकको दशैं पनि रुएरै जाने भयो हगी ! : दशैं मान्न नेपाल जान नपाउने र धुरु धुरु रुँदै आफ्नी आमा सम्झिने बिदेशिएका तमाम नेपालीहरु मा समर्पित दशैं गीत ।
यस पटकको दशैं पनि रुएरै जाने भयो हगी ! : दशैं मान्न नेपाल जान नपाउने र धुरु धुरु रुँदै आफ्नी आमा सम्झिने बिदेशिएका तमाम नेपालीहरु मा समर्पित दशैं गीत ।
देश बिदेशमा रहनुभएका हाम्रा समस्त दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु, ईस्ट मित्र, शुभचिन्तक सबैमा